Ukuhlaziywa: Ngaba iimveliso zeDelta 8 THC zisemthethweni kwilizwe lam?
Umbhali uSawule Meshaki
Uhlaziyo 6 / 30 / 2021
We just got Update Information that the state of Nevada has banned sales and distribution of Delta 8 THC products. You can expect more states that have legalized recreational marijuana to do the same to protect their illegal IRHAFU YERHAFU. Oku akukabhengezwa malunga neendaba okwangoku. le yileta ndiyithunyelelweyo ivela komnye wabalingane endisebenza nabo.
Uhlaziyo 6 / 8 / 2021
Ukuhlaziywa: Meyi 25, 2021
I-Delta-8 THC okwangoku isemthethweni e-MOST STATES, amanye amazwe abeke ukuvalwa okanye ukuthintela. Nalu ulwazi lwethu oluhlaziyiweyo ngoncedo lwe-Red Emperor CBD. Luxanduva lwakho ukulandela yonke imithetho yelizwe kodwa ukuya kuthi ga kwi-Federally Legal Delta 8 -THC yi-% 100 yeepesenti enkosi ngokwasemthethweni kwiBhili yeFama yeTrump ka-2018 eyenze ukuba i-CBD ibe semthethweni kwaye ZONKE iZinto zesityalo. Nceda uncede ukusasaza igama malunga ne-Delta-8 THC ngakumbi kwiindawo ezingekho semthethweni. Banike nje umntu omnyama kwiveki ephelileyo UKUPHILA KWITRONI ngaphandle kweParole eMississippi ukufumana i-1 enye ye-cannabis. Bona: https://nypost.com/2021/05/13/court-upholds-life-sentence-for-man-convicted-of-marijuana-possession/
Abancinci basabanjwa kwaye banikwe iirekhodi zolwaphulo-mthetho ezihlala kwiirekhodi zabo zobomi kwamanye amazwe ngelixa abanye bethengisa iibhiliyoni ngokukhululekileyo. Singanceda ukuyeka oku kungabikho kokusesikweni ngoku.
Nalu uluhlu lwamazwe okwangoku anqatshelwe zero okanye uthintelo
I-Delta 8 esemthethweni ngokupheleleyo
Alabama Ewe Hayi
Alaska Hayi Ewe
Arizona Hayi Ewe
Arkansas Hayi Hayi
California Ewe Ewe
Colorado Hayi Ewe
Connecticut ewe Ewe
Cima Hayi Ewe
District of Columbia Ewe Ewe
Florida Ewe Hayi
Georgia Ewe Hayi
Hawaii Ewe Ewe
Idaho Hayi Hayi
Illinois Ewe Ewe
Indiana Ewe Hayi
Iowa Hayi Hayi
Kansas Ewe Hayi
Kentucky Hayi Hayi
Louisiana Ewe Hayi
Maine Ewe Ewe
Maryland Ewe Ewe
Massachusetts Ewe Ewe
Michigan Ewe Ewe
Minnesota Ewe Hayi
Mississippi Ewe Hayi
Missouri Ewe Hayi
Montana Hayi Ewe
Nebraska Ewe Hayi
Nevada Akukho hlaziyo 6/30/21 Ewe
ENew Hamshire Ewe Hayi
ijezi New Ewe Ewe
New Mexico Ewe Hayi
Inew York Ukutshaya kuthintelwe Ewe
North Carolina Ewe Hayi
North Dakota Ewe Hayi
Ohio Ewe Hayi
Oklahoma Ewe Ewe
Oregon Ewe Ewe
Iipensenvania Ewe Hayi
Rhode Iceland Hayi Ewe
South Carolina Ewe Hayi
South Dakota Ewe Hayi
Tennesee Ewe Hayi
Texas Ewe Hayi
Utah Hayi Hayi
Vermont Hayi Ewe
Virginia Ewe Hayi
Washington Ewe Ingcebiso kuphela Ewe
West Virginia Hayi Hayi
Wisconsin Ewe Hayi
Wyoming Ewe Hayi
I-Delta-8 THC iyeyona nto ithengiswa kakhulu ethengiswa kwi-hemp eyabhaliswa ngokusemthethweni kwibhili yeefama ze-2018, kwaye ke njengoko isiya isanda kwaye amazwe athandwayo azama ukuyithintela. Inxalenye emangalisayo kukuba uninzi lwamazwe athi i-cannabis esemthethweni iyathintela iimveliso ze-Delta 8. Isizathu? Isika kuzo zonke iirhafu ezingekho semthethweni abaziqokelelayo kubanini bamashishini. Uyabona lulwaphulo-mthetho lwamalungelo akho omgaqo-siseko wokuhlawula irhafu kwishedyuli 1 yeziyobisi kuba uyayamkela inyani. Ngapha koko, ukuba uthengisa ngaphezulu kwe-20 yezigidi zeedola zentsangu Delta THC 9 Urhulumente wase-US angakuphumeza phantsi kwe-Federal King Ping Law. Yabona Ukuphangwa kwerhafu enkulu yentsangu. UMlawuli oBomvu wenze imephu ebalaselisa i-Delta-8 okwangoku esemthethweni okanye ethintelweyo.
I-Delta-8 i-THC yenzekile ngokwemvelo i-cannabinoid kwaye ivela kwisityalo se-hemp kwaye yabhaliswa ngokusemthethweni kwi-2018 Bill yeFama nguDonald Trump., Kwaye ngenxa yoko, akukho semthethweni phantsi komthetho wobumbano njenge-CBD. Kungenxa yokuba uninzi lweenqwelo zokulwa ze-Delta 8 kunye nezinye iimveliso ezivenkileni ziyacutshungulwa kwaye azikhutshwa. I-Delta-8 THC itshintshiwe ukusuka kwi-CBD, loo nkqubo kunye nokusebenza kwengqondo kunye nokunxila kunokubangela ukuba amanye amazwe azame ukuvala imveliso.
Kukwabalulekile ukuba uqaphele iivenkile ezininzi ze-CBD ezijikeleze amazwe apho i-marijuana yolonwabo ngokuthengisa ngokungekho mthethweni ithengisa i-Delta 8 THC Iimveliso kwiivenkile zabo ze-CBD nkqu nakwiivenkile ezinkulu. Ewe kunjalo, i-DEA iza kungena izame ukothusa oosomashishini kuba isithi ikwi-Orange Book. Uyaqaphela ukuba abayithethi I-SHIT malunga ne-FEDERALLY ILLEGAL intsangu ehanjiswa eCalifornia, Washington, Colorado, nakwamanye amazwe amaninzi. Ngokwam ndicinga ukuba i-DEA ilawula uninzi lwezixhobo ezisemthethweni. Ngaba awuyifumani i-ODD yokuba iarhente ye-DEA ingangena kwiMarike ye-Marijuana NGOKUPHELELEYO njengoko ibisemthethweni ngelixa lonke ixesha iphosa abemi kwiikheyi ezinokubulala abadlwenguli kunye nabaxhaphazi babantwana kunyaka ongaphambili? Inuka uhlobo lwentlanzi kum awucingi?
Ujonge phantse njenge-DUMB njengoGoogle [UDanny The Worlds's dumbest Sntich] Huh? Watson?
Awuqapheli NYE KWIMALI yezigidi zeedola ngenyanga I-Dispensaries Zomthetho zisebenzisa zonke ezo nzuzo UKUKHULULA amabanjwa asentolongweni ngokuthengisa intsangu. Silapha e-Red Emperor Qokelela sinikela nge-20 yepesenti yazo zonke izibonelelo kumatyala asemthethweni apho sikholelwa ukuba bambalwa kwaye sifumana INKOLELO KUNYE NESOHLWAYO ESINGAQHELEKANGAYO ngokuvalelwa ngelixa abanye abemi baseMelika bethengisa iibhiliyoni ngeenyanga. Oku kukwaphula ngokucacileyo amalungelo omgaqo-siseko okhuseleko olulinganayo phantsi komthetho.
Okwangoku, iDelta-8 ivaliwe okanye ithintelwe eAlaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Delaware, Kentucky, Idaho, Iowa, Montana, New York, Rhode Island, Utah, Vermont nase Washington (Advisory Only). Isithintelo asinakuba yi-vape okanye imveliso ye-delt8 etshayayo kodwa iiglamu ezithambileyo kunye nezinto ezinokutya zilungile ke qiniseka ukuba ujonga imithetho yakho yaseburhulumenteni neyasekhaya, siyakuhlaziya eli phepha nanini na kukho into etshintsha.
Ukuvalwa komthetho kunye nokucaciswa kwemithetho ngoku kuqwalaselwa kwamanye amazwe kubandakanya iOregon, Michigan, North Dakota, Oklahoma, ne Illinois.
IAlabama ipasise umthetho wokukhuphela ngaphandle i-Delta 8 ekubeni ingekho semthethweni ukunceda amafama abo e-hemp. Ke ungalitshintsha elo lizwe libe luhlaza.
Ukuba awudingi ESINYE ISIZATHU sokuxelela abahlobo bakho malunga ne-Delta 8 THC, Bathumba abantwana e-Alabama apho i-Delta 8 THC iyi-100 yeepesenti esemthethweni. Ukuba ebetshaya iimveliso zethu ezivavanywa ngumntu wesithathu kwaye zibhalwe i-coudlnt zide zambeka ii-hand cuffs kuyeke nokuthatha umntwana wakhe. https://www.al.com/crime/2021/06/alabama-removes-toddler-from-michigan-family-found-with-marijuana.html?outputType=amp
Ungalindela ukuba amazwe amaninzi abeke izithintelo kubo kwaye ungalindela imiceli mngeni emininzi kwezomthetho ngakumbi kumazwe asele enendawo zokuzonwabisa kwaye abafuni ukuba iDelta 8 isike kwiirhafu zabo ezingekho mthethweni. Iidemokhrasi zibeka umthetho njengoko sithetha ukwenza intsangu ngokusemthethweni kumgangatho wobumbano kungabubudenge kubo ukuqala ukuhlasela iDelta 8 ngakumbi emva kokuba bebanga ukuba bayathandana nemicimbi yobomi obuMnyama. Ewe, ukuba babekhathalele ngokwenene bayakuyibeka ngokusemthethweni intsangu kwaye babakhuphe bonke entolongweni ngenxa yolwaphulo-mthetho olungelolwenyani olwenziwe yiNixon Administration.
bona: Ibali elothusayo emva kwesibhengezo sikaNixon 'seMfazwe ngeziyobisi' ngalo mhla ngo-1971 ojolise kwabantsundu kunye nabaphembeleli bemfazwe | IZiko lamaShishini aseMelika-i-AEI
Zonke iiphakheji ze-Red Emperor CBD ziza nekhowudi e-scannable ukuze ukunyanzeliswa komthetho kunye nabatshutshisi bangabinakho ukubamba okanye ukutshutshisa kumazwe angakhange abeke mthetho. Ngaba umthengisi wendawo yakho angayenza loo nto? Yizame ngoku usebenzisa i-smartphone yakho ukuskena ikhowudi kumfanekiso ongezantsi.
Ngaba ukhe wafuna ukuba neyakho iDpensary? Nali ithuba lakho. Sinexabiso elininzi kunye namaxabiso apheleleyo weemveliso ze-Delta 8 THC.
Zuza iipesenti ezili-10 zeekhomishini kuyo yonke intengiso ye-Delta 8 THC evela kubahlobo bakho nakumaqabane akho eendaba ezentlalo. I-imeyile sales@RedemperorCBD.com ukuba ubhalise.
I-CBD kunye ne-Delta 8 iimveliso ze-THC zingathengiswa ngawo nawuphi na umrhwebi. akukho layisenisi ikhethekileyo iyafuneka okanye irhafu yokurhweba ngentengo ephambeneyo. Ukuba ufuna Ubuninzi okanye ivenkile eDelta 8 THC iimveliso zoNxibelelwano loMlawuli oBomvu zinokufikelela kweyona ndawo inkulu ye-CBD kunye ne-Delta 8 yeefama ze-THC e-United States. Unokufumana uluhlu lwethu ngoku lwexabiso kunye nexabiso apha.
Delta ngobuninzi 8 THC Iimveliso
Amakhonkco ezixhobo: https://journal.cannabislaw.report/buscher-law-delta-8-thc-is-still-legal-despite-the-new-dea-rule/